Fikarohana momba ny firaisana Ny tantaram-piainana taloha tamin'ny fitoviana ara-batana, fahatsiarovana phobia sy ara-jeografika: tranga fanalefahana indray an'i Margaret Kempthorne | Gladys Deacon - Fikarohana Reincarnation
Fomba fiaina: Fahatsiarovana ny fiainana tany am-piandohana
Ny lohahevitra momba io raharaha io, Gladys Deacon, dia nanoratra ny tantarany izay navoaka tao amin'ny gazety London iray, ny Sunday Express, tamin'ny Jona 2, 1935. Ankoatra izay, Ian Stevenson, MD, dia nanadihady azy tao amin'ny 1963. Noho izany, manana loharanom-baovao roa isika momba ity raharaha mahaliana ity.
Fiainana taloha Phobia: I Gladys dia tia ny anarana Margaret ary manana Phobia of fianjerana
Gladys Deacon dia teraka tamin'ny Janoary 25, 1900 tao Leicestershire, Angletera Ny rainy dia mpandrafitra ary Katolika ny ray aman-dreniny. I Gladys dia nanana rahavavy iray ary rahavaviny. Tiany ny anarany Margaret ary fantany taty aoriana fa ny ray aman-dreniny dia nihevitra ny hanomezana ny Margaret azy. Amin'ny maha zazavavy kely azy, dia voan'ny fobia nianjera izy
Fahatsiarovana ny fiainana teo amin'ny fiainana geografia: mahatsiaro ny fianjanan'ny fiainana taloha teo an-tampon'ny tendrombohitra iray i Glady
Fony 11 taona izy dia nentin-dReny niaraka tamin'ny rahalahiny i Gladys sy ny rahalahiny avy tany Northamptonshire, izay nipetrahan'izy ireo, nankany Dorset. Handeha hitsidika havana amin'ny Krismasy izy ireo. Gladys dia mamaritra ny toe-javatra nitranga nandritra ny dia:
“Rehefa lasa Yeovil Niato nandritra ny fotoana kelikely ny fiaran-dalamby nisy anay, ary gaga aho fa nahalala ahy ilay firenena, indrindra fa ny zorobe iray mifanohitra.
Hoy aho tamin'ny rahalahiko: 'Fony aho ankizivavy kely dia nipetraka tao amin'ny trano iray tsy lavitra teo. Tadidiko fa nihazakazaka nidina teny amin'ny havoana iray niaraka tamina olon-dehibe roa mitazona ny tanako aho ary nianjera daholo izahay ary naratra ny tongotro. '
Eto ny reniko dia nikorokosy ahy mba hiteny ahy tsy marina. Mbola tsy toy izany mihitsy aho taloha ary tena tsy niaina teto mihitsy. Nanizingizina aho fa nanana aho, ary rehefa nihazakazaka teo amin'ilay havoana aho dia nanao akanjo fotsy hatrany am-paosiko misy ravina maintso kely teo amboniny, ary ireo olona mitazona ny tanako dia manao akanjo vita amin'ny volontany manga sy fotsy.
Hoy aho hoe: 'Margaret ny anarako tamin'izany.' ”(1)
Fanamarinana ny fahatsiarovan'i Gladys ny fiainana taloha ny fahalavoana
Ny loharanon'ny fahatsiarovana an'i Gladys momba ny fiainana efa hita taloha dia mijanona ho mistery mandritra ny taona 17 manaraka. Avy eo, nandritra ny dia iray hafa tany Dorset ao 1928, fony Xady dia 28 taona, dia tsy nampoizina ny nanamafisana ny fahatsiarovany ny fiainany taloha. Andao andao hamerina hitantara ny fihodinan'ny hetsika i Gladys:
“Nandeha fiara tany 1928 aho niaraka tamin'ny mpampiasa ahy tamin'ny alàlan'i Dorset. Raha niova ny kodiarana dia nandeha nankany amin'ny trano kely iray tsy lavitra an'i Poole izay nisy tovovavy iray naka dite izahay.
Fanahy mitarika: ny fahitan'i Gladys azy amin'ny saripika taloha ary nahazoany fanamarinana ny fiainany taloha.
Teo am-piandrasana azy dia nahita sary tranainy teo amin'ny fitaratra, ary gaga aho nahita fa izaho dia toy ny teo aho, nihazakazaka teo amin'io havoana io, zanak'iza dimy lahy manana tarehy tsotra sy matotra, manao akanjo fotsy lava be. maitso.
Nikiakiaka aho hoe: 'Fa maninona aho!' Ary mazava ho azy fa na ny mpampiasa ahy sy ilay vehivavy dia nihomehy. Hoy ilay vehivavy: 'Eny, maty io zaza io taona maro lasa izay, nefa heveriko fa nitovitovy aminy ianao tamin'ny mbola kely', ary nanaiky ny mpampiasa ahy.
Nahita ahy nahaliana ahy, niantso ny reniny ilay vehivavy hilaza amiko ny tantaran'ilay zaza.
Nilaza izy fa i Margaret Kempthorne, zanaka tokana ao amin'ny mpamboly. Ny renim-pianakaviana nitantara izany, dia mpiasa tany amin'ny toeram-piompiana.
Rehefa dimy taona teo ho eo i Margaret dia nihazakazaka nidina avy eo an-tampon-kavoana tamin'io andriambavy io sy ny iray hafa, raha tratra ny iray tamin'ireo lehibe nitana ny tongony tamin'ny lavaka bitro ary dia niara-nianjera izy rehetra.
Vaky mafy ny tongony. Tsy sitrana intsony izy ary maty roa volana taorian'izay… '”(2)
Fahatsiarovana ny fiainana taloha: Voamarina ny toerana niainan'i Margaret taloha, tao Yeovil
Nanontany i Gladys hoe aiza no misy ilay toeram-pambolena, izay nahalavo an'i Margaret. Namaly ilay ramatoa taloha fa tsy hainy ny tena toerana misy ny toeram-piompiana, fa eo akaikin'ny tanàna tsena, Yeovil, toerana namarotana ny ronono sy ny vokatra.
Nanontany i Gladys oviana izany. Namaly ilay ramatoa taloha tamin'ny alàlan'ny fisintonana ilay sary ary natolony an'i Gladys, izay nijery ny ambadiky ny sary teo izay nahitana sombin-taratasy iray vita tamin'ny felany. Hoy i Gladys:
"Namaky teo aho, 'Margaret Kempthorne, teraka tamin'ny 25 Janoary, 1830, dia maty ny volana Oktobra 11, 1835" (3)
Tsarovy fa i Gladys dia teraka tamin'ny Janoary 25, tamin'ny taona 1900. Raha jerena ireo daty ireo, dia teraka 65 i Gladys taorian'ny nahafatesan'i Margaret.
Fahatsiarovana ny fiainana taloha geografia: Ny fahatsiarovan-tenan'i Gladys taloha dia nampientanentana tamin'ny alàlan'ny fandehanana namaky ilay toerana nisy ny nofo taloha tany amin'ny faritra manodidina ny Yeovil, Angletera.
Fitoviana ara-batana: Gladys, mpampiasa azy ary ilay tovolahy ao Dorset, izay nahitana ny sary hosodoko Margaret Kempthorne, dia nanaiky izy rehetra fa misy fitoviana ara-batana lehibe eo anelanelan'i Margaret sy Gladys.
Phobia avy amin'ny fiainana taloha: Maty vokatry ny fahalavoana i Margaret ka niafara tamin'ny tongotra tapaka, izay nahatonga ny fahafatesany. Gladys, tamin'ny mbola tovovavy, dia nanana phobia nianjera.
Fanahy Masina: Io raharaha io dia nohamafisin'i Gladys tamim-pitandremana tamina trano izay nisy ny vavolombelona tamin'ny fiainan'i Margaret Kempthorne. Nisy sary hoso-doko avy amin'i Margaret nihantona teo amin'ny rindrina, izay fantatr'i Gladys fa izy dia nahitana ny fahatongavana ho nofo. Amin'ity saripika ity dia manao akanjo mitovy i Margaret izay hitan'i Gladys tamin'ny fahatsiarovana ny fiainany taloha, frock fotsy misy haingon-trano maintso.
Ny nanatri-maso ny fiainan'i Margaret, izay nofaritan'i Gladys ho “vehivavy antitra” no renin'ny tompon-trano. Ity renim-pianakaviana tranainy ity, reniben'ny tompon'ny trano, dia iray amin'ireo olona izay niaraka tamin'i Margaret fony izy nihazakazaka teo amin'ny havoana ary nianjera, nanapaka ny tongony, izay nahatonga azy ho faty.
Inona no loza ateraky ny fahitana ity trano ity? Hitan'i Gladys io trano io satria ny fiara nalehany niaraka tamin'ny mpampiasa azy, dia nisy kodiarana matevina, izay mila fanamboarana.
Tsiahivina fa ny kodiarana matevina no nitranga tamin'io toerana io satria ny fanahy ratsy no nahatonga an'io zava-nitranga io, izay nahafahan'i Gladys nanamarina ny fahatsiarovana ny fiainany taloha. Ity karazana fanolorana fanahy naroso ity dia narahina tamina tranga misy ihany koa Carroll Beckwith | Robert Snow ary John B. Gordon Jeff Keene.
Fandrindrana ny Fahatongavana ho nofo: Ao anatin'ny famerenana indray ity tranga fananganana ity indray dia hitantsika ny daty nahaterahana. Margaret Kempthorne dia teraka tamin'ny Janoary 25, 1830 ary Gladys Deacon dia teraka tamin'ny Janoary 25, 1900. Na dia mety ho kisendrasendra fotsiny ny daty nahaterahan'ny volana Janoary lasa teo, dia mety hisolo tena an'i Margaret koa, avy amin'ny tontolon'ny fanahy, manome drafitra ny fahaterahany io daty io mba hahazoana mamatotra avy amin'ny fahatongavany ho lasa taloha.
Misy tranga izay ny datin'ny reincarnation an'ny olona iray dia efa voalaza mialoha avy amin'ny tontolon'ny fanahy. Amin'ny tranga fanambadiana ao amin'ny vatana vaovao indray Felix Fresnel | Cristophe Albert, Felix, avy amin'ny tontolon'ny fanahy, nanambara mialoha ny daty, ny toerana sy ny ankohonany amin'ny maha-tonga nofo azy. Ao amin'ny tranga reincarnation of Jaako Vuorenlehto | Taru Javi, Jaako, avy amin'ny tontolon'ny fanahy, nanambara ny datin'ny fahaterahany indray.
Fiovan'ny Fivavahana: Teraka tao amin'ny fianakaviana katolika romana i Gladys ary gaga be ny reniny rehefa nanomboka namaritaka ireo tranga nitranga tamin'ny fotoana niainany i Gladys, tamin'ny 11 taona. Tamin'ity tranga ity, ny ankizivavy katolika romana dia niova fo ho amin'ny finoana ny reincarnation.
1. Stevenson, Ian: Karazan-javamaniry Eropeana momba ny karazana Reincarnation, McFarland, 2003, pejy 52-53
2. Stevenson, Ian: Karazan-javamaniry Eropeana momba ny karazana Reincarnation, McFarland, 2003, pejy 53
3. Stevenson, Ian: Karazan-javamaniry Eropeana momba ny karazana Reincarnation, McFarland, 2003, pejy 53